Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-China kunye ne-Afrika iNtsebenziswano eyomeleleyo ekulweni i-COVID-19
Ubudlelwane phakathi kweChina ne-Afrika kulindeleke ukuba buqhubeleke bukhula njengoko intsebenziswano iqiniswa ngakumbi kwimimandla eyahlukeneyo emva kweNkomfa yaBaphathiswa yesi-8 eqhubekayo yeQonga leNtsebenziswano phakathi kweChina ne-Afrika (i-FOCAC) ebibanjelwe eDakar, eSenegal.
Ecacisa ngemfihlo yobuhlobo be-China-Afrika kunye nokujonga kuphuhliso lwexesha elizayo lobudlelwane babo, waqaqambisa umanyano ngokuchasene nobhubhane, ukuqinisa intsebenziswano ebonakalayo, ukukhuthaza uphuhliso lohlaza, kunye nokukhusela ubulungisa nobulungisa.
Intsebenziswano ngokuchasene ne-COVID-19
"Ukufikelela kummiselo obekiweyo yiManyano ye-Afrika yokugonya iipesenti ezingama-60 zabemi base-Afrika ngokuchasene ne-COVID-19 ngo-2022, i-China izakubonelela ngeedosi ezikwibhiliyoni enye yezitofu zokugonya e-Afrika, apho iidosi ezizigidi ezingama-600 ziya kubonelelwa simahla," utshilo uXi. .
Ngawona maxesha anzima kumlo waseTshayina wokulwa ubhubhani we-COVID-19, amazwe ase-Afrika kunye nemibutho yengingqi efana neManyano ye-Afrika (i-AU) inike inkxaso eyomeleleyo e-China. Emva kokuba i-COVID-19 ihlasele i-Afrika, i-China yabonelela amazwe ase-Afrika angama-50 kunye neKhomishini ye-AU ngamayeza okugonya i-COVID-19.
“I-China ayinakuze ibulibale ubuhlobo obunzulu bamazwe ase-Afrika,” utshilo u-Xi, esongeza ukuba i-China izakwenza iiprojekthi ezili-10 zonyango kunye nezempilo kumazwe ase-Afrika kwaye ithumele amalungu eqela lezonyango ali-1,500 kunye neengcali zempilo yoluntu e-Afrika.
Ekuqaleni kwale veki, esona sakhiwo siphambili sekomkhulu elixhaswa ngemali yiTshayina kumaZiko eAfrika oLawulo lweSifo kunye noThintelo lwagqitywa ngokwesakhiwo.
Intsebenziswano esebenzayo kwiinkalo ezahlukeneyo
I-China iza kusebenzisana ne-Afrika ukwandisa urhwebo notyalo-mali, ukwabelana ngamava okuphelisa intlupheko, nokomeleza intsebenziswano kuqoqosho lwedijithali namandla ahlaziyekayo, utshilo u-Xi.
I-China iya kuthumela iingcali zezolimo ze-500 e-Afrika, zisebenze ngokusondeleyo kunye namazwe ase-Afrika ukuphumeza iiprojekthi ezisithoba kwimpilo, ukunciphisa intlupheko, urhwebo, utyalo-mali, ukuveliswa kwezinto ezintsha zedijithali, uphuhliso oluluhlaza, ukwakhiwa kwamandla, ukutshintshiselana kwenkcubeko kunye nokhuseleko, wongezelela.
Ukusukela ekusekweni kweFOCAC, iinkampani zaseTshayina zisebenzise iimali ezahlukeneyo ukunceda amazwe aseAfrika ukuba akhe kwaye aphucule ngaphezulu kwe-10,000 yeekhilomitha zoololiwe, phantse iikhilomitha ezili-100,000 zeendlela, phantse iibhulorho ezili-1,000 kunye namachweba angama-100, kunye neekhilomitha ezingama-66,000 zothumelo lwamandla kunye nokuhambisa umbane, ngokutsho. kwiphepha elimhlophe elinesihloko esithi "i-China kunye ne-Afrika kwiXesha elitsha: iNtsebenziswano yokuLingana" ekhutshwe ngoLwesihlanu.
Ukwakha uluntu lwaseTshayina-Afrika kunye nekamva ekwabelwana ngalo
Lo nyaka uphawula isikhumbuzo seminyaka engama-65 kwaqalisa ubudlelwane bozakuzo phakathi kweTshayina namazwe ase-Afrika.
Encoma umoya wobuhlobo nentsebenziswano phakathi kwe-China ne-Afrika, u-Xi uthe ibonisa amava omabini la macala okwabelana ngeengxaki kunye nentlekele kwaye isebenza njengomthombo wamandla okuqhubela phambili amaqhina e-China ne-Afrika.
Kule minyaka ingama-65 idlulileyo, i-China ne-Afrika zenze umanyano olungenakophulwa kumzabalazo ochasene ne-impiriyalizim kunye nekoloniyalizim, kwaye ziqalise indlela eyahlukileyo yentsebenziswano kuhambo olusingise kuphuhliso nokuvuselelwa, utshilo.
“Sisonke, sibhale isahluko esihle sokuncedana phakathi kweenguqu ezinzima, kwaye simisele umzekelo oqaqambileyo wokwakha uhlobo olutsha lobudlelwane bamazwe ngamazwe,” utshilo.
U-Xi ubeke phambili imigaqo yomgaqo-nkqubo wase-China wase-Afrika: ukunyaniseka, iziphumo zokwenyani, uthando kunye nokholo oluhle, kunye nokulandela izinto ezilungileyo kunye neminqweno ekwabelwana ngayo.
Kwinyathelo lokuqala lamazwe ase-China kunye namazwe ase-Afrika, i-FOCAC yamiselwa ngokusesikweni kwiNkomfa yayo yokuqala yabaPhathiswa eBeijing ngo-Okthobha wama-2000, ngeenjongo zokusabela kwimingeni evela kumanyano lwamazwe ngamazwe kwezoqoqosho kunye nokufuna uphuhliso olufanayo.
I-FOCAC ngoku inamalungu angama-55, aquka i-China, amazwe angama-53 ase-Afrika anobudlelwane bozakuzo kunye ne-China, kunye neKomishoni ye-AU.